ဘုရားလေးဆူ သစ္စာအဓိဌာန်ပါရမီကျင့်စဉ် ~ မနောမယ ဂမ်ဘီရဂြာနယျ
ရှစ်ဆယ့်ရှစ် အရေးတော်ပုံကြီး စဖြစ်က တည်းက အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ အလုပ်မဖြစ်တော့ လို့ စားဝတ်နေရေးတွေ ကျပ်တည်းခဲ့တာ အရေး တော်ပုံတွေ ကိုယ်ရှိန်သတ်လို့ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိ ပြားမှု တည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ စကားလုံးသစ်ကြီး ထွန်းကားလာတဲ့ အချိန်အထိ အနုပညာ လုပ်ငန်း တွေက ယောင်လည်လည် ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။
အိမ်ရှင်မ “ညွန့်မေ”ရဲ့ အမြော်အမြင်ကြီးမှု တွေကြောင့်သာ အိမ်ဆိုင်ကလေး ဖွင့်ဖြစ်ခဲ့လို့ သီချင်း မရေးရလည်း ထမင်းနပ်မှန်တော့ စားဖြစ်ခဲ့ရပါရဲ့။ သီချင်းရေးရမှ ထမင်းလည်းစားရ၊ အိမ်ထောင်ရေး လည်း အဆင်ပြေ။ သီချင်းမရေးရတော့ ဝင်ငွေမရှိ။ လူမှုစရိတ်တွေကိုလည်း အပြေအလည် မရှင်းလင်း နိုင်တော့ ဘဝကလည်း ဂယောင်ချာချာ။ စိတ်က လည်း ဂယောင်ချောက်ချား။ ဟုတ်တိပတ်တိလည်း အဓိဋ္ဌာန်တွေမဝင်ဖြစ်။ တည်တည်တန့်တန့်လည်း ပုတီးမစိပ်ဖြစ်။ အိမ်မှာလည်း ငြိမ်ငြိမ် ထိုင်မနေ တတ်။ ရွှေတိဂုံ၊ ဆူးလေ၊ ရွှေဘုန်းပွင့်၊ ဗိုလ်တ ထောင် စေတီတွေ ဆီသွားလိုက် ဟိုနားထိုင် သည် နားထိုင် ပြန်လာ။ အဲသည်လို ဖြစ်နေချိန် … မေဃဝတီဆရာတော်ကြီးက အဓိဋ္ဌာန်တစ်ခု ဝင်ခိုင်း ခဲ့တာကို အမှတ်တရ ရှိမိနေတယ်။ သတိတရ ဖြစ်မိ နေပါတယ်။
ကျေးဇူးတော်ရှင် မေဃဝတီဆရာတော် ကြီး ဘဝနတ်ထံသို့ ကြွမြန်း စံမြန်းနေသည်မှာ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်ဆိုလျှင် (၁၅)နှစ် ပြည့်ပါမည်။ သက်တော်အားဖြင့် ရှိနေမယ်ဆိုလျှင် သက်တော်(၁၀ဝ)၊ ရာပြည့်၊ ကျေးဇူးတော်ရှင် ဆရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူး အလီလီ။ အထွေ ထွေအပြားပြား များလှစွာရှိခဲ့သည်ကို သားသမီး မြေးမြစ်အပေါင်း ဒကာ၊ ဒကာမအပေါင်းတို့က “ဂုဏ်ရည်ရည်စူး၊ အထူး ပူဇော်ပွဲကြီးကို မေဃဝတီ ကျောင်းတော်ကြီးတွင် ပေါင်းစုလို့ ကောင်းမှုပြုရန် စီစဉ်နေကြပြီဆိုတာ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ကြားသိနေရ သည်ကြောင့်လည်း၊ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ကျေးဇူးတွေ ကို ပိုမိုသတိရခြင်းတွေ ဖြစ်မိနေရပါတော့တယ်။
အမှတ်တရ များစွာတွေထဲက အမှတ်တရ တစ်ခုရဲ့ အဆန်းတကျယ် ဖြစ်မှုတစ်ခုကို ယနေ့တိုင် ခံစားနေရပြီး သတိတရ ဖြစ်မိတိုင်း၊ ခံစားရတိုင်း လည်း ဆရာတော်ကြီး စေခိုင်းတဲ့အတိုင်း အဓိဋ္ဌာန် တွေ ယနေ့ထက်တိုင် တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုး ဝင် လျက်ရှိနေမိပါသည်။
ဆရာတော်ကြီး စေခိုင်းတဲ့ အဓိဋ္ဌာန်ကို တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ်မြောက် ဝင်လို့လည်း ပြီးရော ကျွန်တော့် ဘဝအပြောင်းအလဲတွေက မယုံ နိုင်လောက်အောင် ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာ။ အခုပြန် တွေး အခုကြက်သီးတွေထ၊ အခုအံ့ဩ? အခု မယုံ နိုင်စရာ ဖြစ်နေရပြီး အဲသည်လို ဖြစ်ရတိုင်းလည်း ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ကျေးဇူးဂုဏ်တွေကို ရည်မြော်မှန်း ဆ ဦးနှိမ်ချကာ ရှိခိုးမိလိုက်သည်ချည်း ဖြစ်နေရပါ သည်။
ဆရာတော်ကြီး စေခိုင်းတဲ့ အဓိဋ္ဌာန်က ရိုး ရိုးကလေးပါပဲ။ ကျွန်တော်သွားနေကျ ရွှေတိဂုံ၊ ဆူးလေ၊ ရွှေဘုန်းပွင့်၊ ဗိုလ်တထောင်စေတီတော် တွေကို အစီအစဉ်အတိုင်းသွား၍ အဓိဋ္ဌာန်ပြုပြီး နေ့ ချင်းပြီး ဖူးမြော်လှူဒါန်း ရတာပါ။ ကျွန်တော့်အဖို့ အမှတ်တရ အဆန်းတကျယ်လည်းဖြစ်၊ အံ့ဩခြင်း ဖြစ်ရတာလည်း နှစ်ခုရှိနေပါတယ်။ တစ်ခုက အဓိဋ္ဌာန် တွေဝင်ပြီးတိုင်း ဆုအမျိုးမျိုး ကျွန်တော်တောင်းတတ် လေ့ရှိတယ်ဆိုတာကို ဆရာတော်ကြီး ကြိုတင်သိနေ ခြင်းကို ပြန်တွေးမိတော့ ရယ်စရာကြီး ဖြစ်ရတာ လည်းရှိရဲ့။
“ကျွန်တော့်ကို ‘ညွန့်မေ’ သဝန်တိုခြင်း တွေ ကင်းပါစေ။ ရန်ဖြစ်ကြခြင်း ဘေးဆိုးများမှ ကင်းဝေးရပါစေ”
“စကားမပြော နားမကြားကြတဲ့ ကလေး လေးတွေရဲ့ ကျောင်းစရိတ်၊ စားစရိတ်တွေ ပြေလည် အောင် ငွေတွေရချင်ပါတယ်၊ သီချင်းတွေ အများကြီး ရေးခိုင်းသူတွေနဲ့ အမြန်တွေ့ရပါစေ”
“သီချင်းတွေရေးတဲ့ အလုပ်က စားရေး ဝတ် ရေးတွေ မပြည့်စုံပါဘုရား၊ သိဒ္ဓိရှင် မဟိဒ္ဓိရှင်တွေ လို ဥုံဖွ ဆိုတာနဲ့ အကုန်ရတဲ့ ပုဏ္ဏက ဖြစ်ချင် ပါတယ်ဘုရား”
အဲသည်လို ဆုတောင်းလေ့ရှိတာကို ဆရာ တော်ကြီး ဘယ်လိုသိသလဲ မပြောတတ်ပေါင်ဗျာ။
“လူကလေး ပုဏ္ဏက …အဓိဋ္ဌာန်ပါရမီ ဆောက်တည်တိုင်း ပေါက်တောက်ကရ ဆုတောင်း တာတွေ မလုပ်ရဘူး” “အသေအချာ နားထောင်ပါ၊ လိုက်နာပါ လူကလေး”
“ဣဓံမေပုညံ နိဗ္ဗာနဿ ပစ္စယောဟောတု”လို့သာ ဆိုပါ။ ဆုတောင်းပါ လူကလေး။ နိဗ္ဗာန် သို့ ရောက်ကြောင်း ကောင်းသော အထောက်အပံ့ ဖြစ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုထားမှတော့ ကျန်တဲ့ ဖြစ်ချင်မှု ဆန္ဒအသီးသီးတွေဟာ စီကာစဉ်ကာ ဖြစ်လာတတ် အကျိုးပေးလာတတ်ပါတယ် ဆိုတာ အလေးအနက် ယုံကြည်ထားဖို့ လိုအပ်တယ်ကွယ့်”
“သစ္စာ အဓိဋ္ဌာန် ပါရမီဖြည့်ဆည်းရာမှာ ဆန္ဒလည်း ရှိရမယ်။ မပျက်မယွင်း မကျိုးမပေါက်တဲ့ သစ္စာလည်း တည်ရမယ်။ ဆုတောင်းလည်း မှန်ရ မယ်”
မှတ်ထားနော် လူကလေး။ “နိဗ္ဗာ နဿ ပစ္စယောဟောတု”။ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ အမှာစကား များက အခုပင်ကဲ့သို့ နားထဲမှာကြားယောင်မိကြား မိနေသည်ဖြစ်နေပါသည်။ အမှတ်တရ နောက်တစ် ခုက ပုဏ္ဏက တစ်ယောက် ?မမျှော်လင့်ဘဲ ရင်းနှီး လုပ်ကိုင်စားဖို့ ငွေကြေးတွေ အကူအညီရရှိခဲ့ပြီး ဝင်ဒါမီယာ သံလွင်လမ်းမကြီးပေါ်မှာ အတော့်ကို ထင်ရှားခဲ့တဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ပုဏ္ဏက “လဖေ့ရေ” ဆိုင်ဖွင့်နိုင်ပြီး ပြေလည်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်။ (နေ့ချင်းညချင်း တော့မဟုတ်) သုံးလလောက်မှ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အမှတ် တရ တစ်ခုပါဗျာ။
အဲသည့် အမှတ်တရကလေးနှစ်ခုအတွက် ကျွန်တော် အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ခဲပုံကလေးကို ပြောပြချင် တာပါ။ အသေးစိပ်ကို ပြောပြချင်တာပါ။ ကျွန်တော့် လို အကျပ်အတည်း ကြုံတွေ့နေကြသူများ ရှိနေပါ က ကျွန်တော့်လိုပဲ ကြုံတွေ့နေတဲ့ အကျပ်အတည်း တွေထဲက လွတ်မြောက် အေးချမ်းစေချင်တဲ့ ဆန္ဒ တွေ ရင်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာလို့ပါ။ နောက်တစ်ခုက ဆရာတော်ကြီးကို လွမ်းလို့။ အလွမ်းပြေကျေးဇူး ဂုဏ်ရည်တွေ ရည်စူးဖူးမြော်ကြည်ညို ကျေးဇူးဆပ် ချင်လို့?ဆရာတော်ကြီး ဝင်ခိုင်းတဲ့ အဓိဋ္ဌာန်ဝင်နည်း ကလေးတစ်ခုကို ရေးပြချင်တာပါ။ သူတော်ကောင်း ပရိသတ်တို့အတွက် တန်ဖိုးကြီးကြီး ရလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါကြောင်း။ ခေါင်းစဉ်က …
“နိဗ္ဗာ နဿ ပစ္စယော ဟောတု”
သည်ကနေ့ အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ရမည့်နေ့၊ ရွှေတိဂုံ စေတီတော် အရှေ့မုခ်ရှိ ဓာတ်လှေကား ရှေ့သို့ မနက် လေးနာရီကျော်ကျော်ထဲက ရောက်နေခဲ့ သည်။ ဓာတ်လှေကားသည် တစ်ခါတစ်ရံ လေးနာ ရီခွဲတွင် ဖွင့်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ငါးနာရီမှ ဖွင့်တတ်သည်ဟု သတိထားမိပါသည်။ အများအား ဖြင့် စောင်းတန်းမှသာ သွားသွားလာလာ ရှိခဲ့ပါသော ကြောင့် ဓာတ်လှေကား အချိန်ကို မသိခဲ့။ မသိခဲ့ သောကြောင့်သာ ယခုကဲ့သို့ စောစောလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော့်ထက် ဝီရိယကောင်းသော ဘုရားဖူး ပရိသတ်ကို တွေ့ရသည်။ ဆယ်ယောက်ခန့် ရှိမည် ထင်ပါသည်။ ကျွန်တော်က ဓာတ်လှေကား အနီးရှိ ညောင်ပင်ကြီး အောက်သို့ လျှောက်ခဲ့သည်။ အဓိဋ္ဌာန် ဝင်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းများ၊ လှူမည့် တံခွန် ကုက္ကားများပါသော ပလတ်စတစ် ခြင်းကလေးကို မြေသို့ချကာ ခြေအစုံကို ရပ်သည်။ လက်အစုံကို ဦးထိပ်မှာ မိုးသည်။ ရှေ့၌ရှိသော သိင်္ဂုတ္တရကုန်း တော်ပေါ်မှ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးကို လှမ်းမြော် ကြည်ညိုပြီး မျက်လုံးကို ဖွဖွမှိတ်ကာ အာရုံကို စုစည်း လိုက်ပြီးနောက် ပဏာမ ဂါရဝပြုပါသည်။
ပဏာမ ဂါရဝ (၁)
ဩကာသ-ဩကာသ – ဩကာသ (နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗု ဒဿ)၃
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားရှင်တော်မြတ်တို့အား ဤ နေရာမှ ဤဌာနမှ နေပြီးသက်ရှိ ထင်ရှားအာရုံ ပွားကာ ရိုသေစွာဖြင့် ရှိခိုးပါ၏။ ကန်တော့ပါ၏။ ခွင့်ပန်ကြား အပ်ပါ၏ အရှင်ဘုရား။ ဘုရားတပည့် တော်သည် သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲ အပေါင်းတို့မှ လွတ် မြောက်ပါရစေခြင်း အကျိုးငှာလည်းကောင်း၊ ဒုက္ခ ခပ်သိမ်း ဒေါသခပ်သိမ်းတို့မှ ကင်းရာငြိမ်းရာ ချုပ်ရာ သိမ်းရာ ဖြစ်တော်မူပါသော အသင်္ခတဓာတ် နိဗ္ဗာန် မြတ်သို့ရောက်ပါစေကြောင်းကောင်းသောအထောက် အပံ့ဖြစ်ပါစေခြင်း အကျိုးငှာလည်းကောင်း သစ္စာ အဓိဋ္ဌာန် ပါရမီများကို ဆောက်တည်လိုပါသော ကြောင့် အရှင်မြတ်စွာဘုရားများ ရှေ့တော်မှောက်သို့ ဦးနှိမ်မာန်ချ ရောက်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်ဘုရား။ ဩကာသ ဩကာသ ဩကာသ ခွင့်ပြုတော်မူပါ ဘုရား… ခွင့်ပြုတော်မူပါဘုရား ခွင့်ပြုတော်မူပါ ဘုရား။
(သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်ကြီး ဆက်ဆိုက ပိုကောင်းပါသည်။ အဲသည့်တုန်းက မဆိုတတ်သေး ၍ မဆိုဖြစ်ခဲ့ပါကြောင်း)
ပဏာမ ဂါရဝ (၂)
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးနှင့် အပ်ရာဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အား ရည်စူးပြီး ရိုသေစွာဖြင့် ခွင့်ပန် ကြားအပ်ပါသည်ဗျား။
ဘုရား၊ တရား သံဃာ၊ ရတနာမြတ်သုံးပါးတို့ အား အမှန်တကယ် ယုံကြည်စွာ လေးစားစွာဖြင့် ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ပါသော (မိမိ၏ မွေးနံကိုထည့်ရန်) ဥပမာ – (တနင်္လာနေ့ဖွား) ကျွန်တော်သည် ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီးတွင် သစ္စာအဓိဋ္ဌာန် ပါရမီဝတ်တို့ကို ဖြည့်ဆည်းလိုပါသောကြောင့် (နေရာထိုင်ခင်းများ ခွင့်ပြုတော်မူပါရန်)၂ ရိုသေစွာဖြင့် ခွင့်ပန်ကြား လျှောက်ထားအပ်ပါ၏။
(တေသံ) = ဆိုခဲ့ပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်း တို့သည် (အံဟံ) = ပါရမီရှင် သားတပည့်၏ ရိုသေ သမှု ဂါရဝပြုမှုများတို့ကို စံမြန်းကြရာ ဘုံဗိမာန်နန်း စခန်းအသီးသီးမှနေ၍ ကြားကြပါစေ၊ သိကြပါစေ၊ မြင်ကြပါစေ၊ တွေ့ကြပါစေ၊ ကျန်းမာကြပါစေ၊ ချမ်းသာကြပါစေ၊ ဘေးရန်ခပ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ။ နှလုံးစိတ်ဝမ်း ငြိမ်းချမ်းကြပါစေသတည်း။
ဂါရဝ အစီအစဉ်များ ပြီးဆုံးလို့ မကြာမီမှာပဲ ဓာတ်လှေကားဖွင့်သည်ကြောင့် ရင်ပြင်တော်ပေါ်သို့ ရောက်ရန် ဓာတ်လှေကားနှင့် တက်ခဲ့သည်။ နတ် လမ်းအတိုင်း လျှောက်ခဲ့ပြီး ထွက်ပေါက်ရောက်တော့ ညာဘက်ကို ချိုးကွေ့ကာ အနည်းငယ် လျှောက် လိုက်သောအခါ အရှေ့မုခ်စောင်းတန်းမှ တက်လာ သည့် လှေကားများ အဆုံးရှိ ရင်ပြင်နှင့် ထိပ်တိုက် ဆုံသည်။ ဘယ်ဘက်ကို ချိုးကွေ့ပြီး ဆယ်လှမ်းမျှ လှမ်းပြီးနောက် ညာဘက်သို့ ထွက်လိုက်သော် ရွှေတိဂုံ ရင်ပြင်ကျယ်ကြီးပေါ်သို့ ရောက်ပါပြီ။
တနင်္လာဂြိုဟ်တိုင်နှင့် တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်တိုင်များကို ကျော်ဖြတ်ပြီးနောက် သောကြာဂြိုဟ်တိုင်သို့ ရောက်သောအခါ ရှင်တော် ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား သီတင်းသုံးတော်မူရာ အာရုံခံ တန်ဆောင်းသို့ ဝင်ရန် လှေကား ငါးထစ်မျှကို လှမ်းနင်းပြီး တန်ဆောင်းတွင်း ရှိ ရှင်တော် ဂေါတမမုနိ ရုပ်ပွားတော်ရှေ့ တူရူတွင် နေရာယူ ထိုင်လိုက်ပါသည်။
သံဃာစင်ပေါ်တွင် သံဃာတော် နှစ်ပါးတို့ နေရာယူ ဘုရားဝတ်ပြုနေပါသည်။ မိသားစုတစ်စု တို့သည်လည်း ဆွမ်းတော်ကပ်နေ၏။ ကျွန်တော် လည်း အစီအစဉ် (၁)အရ သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပြုရန် လက်အစုံ ဦးထိပ်မိုးပြီး အောက်ပါတို့ကို ဆိုပြီး ရှိခိုး ပါသည်။ ကန်တော့ပါသည်။ ပူဇော်ပါသည်။
အစီအစဉ် နံပါတ် (၁)
(သစ္စာ အဓိဋ္ဌာန် ပန္နက်တည်ခြင်းနှင့် သစ္စာ အဓိဋ္ဌာန် ပါရမီဝတ်ဖြည့်ဆည်းခြင်း)
(နမော တသ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာ သမ္ဗုဒ္ဓဿ) သုံးကြိမ်ဆိုပြီးနောက် ဩကာသ အစချီ ကန်တော့ချိုးဖြင့် ဘုရားရှိခိုးပါသည်။ ငါးပါး သီလ ခံယူဆောက်တည်ပြီးသော် အောက်တွင် ဖော် ပြပါ ရှိသည်တို့ကို ဆိုပါသည်။)
ဘုရားတပည့်တော် သစ္စာပြုပါသည် အဓိဋ္ဌာန်ပြုပါသည် ဘုရား။ ဘုရားတပည့်တော်သည် သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲ အပေါင်းတို့မှ လွတ်မြောက်ပါ ရစေခြင်း အကျိုးငှာလည်းကောင်း၊? ဒုက္ခခပ်သိမ်း ဒေါသခပ်သိမ်းတို့မှ ကင်းရာငြိမ်းရာ ချုပ်ရာသိမ်းရာ ဖြစ်တော်မူပါသော အသင်္ခတ ဓာတ်နိဗ္ဗာန်မြတ်သို့ ရောက်ပါစေကြောင်း? ကောင်းသော အထောက်အပံ့ ဖြစ်ပါစေခြင်း အကျိုးငှာလည်းကောင်း မင်္ဂလာရှိ သော ယခု အချိန်မှ အစပြု၍ ရွှေတိဂုံစေတီ၊ ဆူး လေစေတီ၊ ရွှေဘုန်းပွင့်စေတီ၊ ဗိုလ်တထောင်စေတီ စုစုပေါင်း စေတီလေးဆူသို့ နေ့ချင်းပြီး သွားရောက် ကာ ထိုစေတီများတွင် သီတင်းသုံးလျက်ရှိနေတော်မူ ကြပါသော ကကုသန္ဓ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၊ ကောဏာ ဂမဏ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၊ ကဿပ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားနှင့် ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့အား ဖူးမြော် မာန်လျော့ ရှိခိုးပါမည်ဘုရား … ကန်တော့ပါမည် ဘုရား …ပူဇော်ပါမည်ဘုရား။
ဤမှန်သော သစ္စာစကားကို ဘိုးတော် ဗြဟ္မာ၊ ဘိုးတော် သိကြား၊ ဝိဇ္ဇာ ရှစ်သောင်း ဆရာ အပေါင်း၊ ရသေ့ရှစ်သောင်း ဆရာကောင်းများနှင့် ကိုယ်စောင့်နတ်မင်းများ၊ အထူးအစောင့်အရှောက် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဝသုနြေ္ဒ နတ်မင်းကြီး၊ ငရဲသနင်း ယမ မင်းကြီးနှင့် ရွှေတိဂုံဘိုးဘိုးကြီးတို့အား (သက်သေပြု ပါ၏)၃ (သက်သေဖြစ်တော်မူကြပါစေ ကုန်သတည်း)၃
(အစီအစဉ် ၁- ရွှေတိဂုံ)
ယခုအခါ သစ္စာအဓိဋ္ဌာန် ပန္နက်တင်ပြီးပြီ ဖြစ်ပါသောကြောင့် အစီအစဉ်အတိုင်း သစ္စာ အဓိဋ္ဌာန် ပွဲဝင်ရတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစဉ်အခါက ကျွန်တော်သည် သာသနာတော်၌ လိမ္မာယဉ်ပါးခြင်း မရှိသေးရာကား ကျွန်တော်၏ ဥာဏ်ရည်အလိုက် ချီးမြှင့်လိုက်သော သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပွဲဝင်နိုင်ရန် စေတီ တော်များမှ ဘုရားလေးဆူတော်ကို ဖူးမြော်နည်း၊ ခွင့်ပန်နည်း၊ အကျဉ်းနည်းနှင့် သရဏဂုံတည်ခြင်း၊ သီလဆောက်တည်ခြင်း လှူဖွယ်ဝတ္ထု ကပ်လှူရာ တွင် ဆိုခြင်းစသည်တို့ကို ဆရာတော်ကြီးက အသေအချာ သင်ပေးပါသော်လည်း ဥာဏ်ရည်မမီ သော ကျွန်တော်သည် အလွယ်မှတ် အလွယ်ခံစားပြီး အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ခဲ့ရပါ၏။ ကျွန်တော် ကံကောင်းခဲ့ပါ၏။ ချီးမွမ်းမခံခဲ့ရသော်လည်း အငေါက်အဆူတော့ မခံခဲ့ ရပါ။
“လူကလေး ပုဏ္ဏက …ဆိုခဲ့တာတွေက ဟန်တော့မကြီးဘူးကွယ့်။ ဘာသာသာသနာ အမှု ဆိုတာ ပကာသန ဟိတ်ဟန်တွေ မကြီးသင့်ဘူး။ မချဲ့သင့်ဘူး။ သတိချပ်ရမယ်။ ဘာသာ သာသနာ အမှုကိစ္စတိုင်းမှာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို ဦးထိပ် ပန်ဆင်ရမယ် “သဒ္ဓါ”ဆိုတဲ့ ကံနှင့် ကံ၏အကျိုး တရားကို ယုံကြည်မှုဟာ ပဓာန အဓိကကျစေရမယ်။ ဟိတ်ဟန်တွေကြီးဖို့ အဓိကမကျပါဘူးကွယ်။ စိတ် သဏ္ဌာန်တွေက ဖြူစင်နေရမယ်။ ရိုးသားရမယ်။ သန့်ရှင်းရမယ်။ ခန့်ခန့် ထည်ထည် အိနြေ္ဒတွေ ရှိရ မယ်”
“စည်းကမ်းနဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေ မပြည့်စုံပေမယ့် ရိုးသားမှုနဲ့ ယှဉ်တွဲနေတဲ့ အနီးကပ်ဆုံး မှန်ကန်မှု တွေပါနေလို့ ဂါထာတော်တွေအပေါ် လူကလေးရဲ့ ခံစားမှုဟာ မချီးမွမ်းထိုက်ပေမယ့် ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့ သဒ္ဓါကြည်ညိုမှုလို့တော့ အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါတယ် ကွယ့်”
(သဒ္ဓါရွှင်တိုင်း ဆိုချင်ရာ မဆို။ ဆိုလိုရင်းကို လိုတို ရှင်းစွာ အဓိပ္ပာယ်ခံစားပြီး ဆိုခဲ့ ပွဲဝင်ခဲ့သော ဂါထာများ)
အကျဉ်းနည်းဖြင့် သရဏဂုံတည်ခြင်း သီလခံယူ ခြင်းဂါထာ။
ဥပေမိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ၊
ဓမ္မံ သံဃဉ္စ နူတ္တရံ၊
သမာဒိ ယာမိ သီလာနိ။
(ဘန္တေအရှင်ဘုရား ဘုရား တပည့်တော် သည် သရဏဂုံ သုံးပါးနှင့်တကွ (အင်္ဂါငါးပါး)နှင့် ပြည့်စုံတော်မူပါသော သီလတော်မြတ်ကို မြတ်နိုးစွာ လေးစားစွာဖြင့် ဆောက်တည်ပါ၏။ ကိုးကွယ်ဆည်း ကပ်ပါ၏။ မကျိုးမပေါက်စေရန်လည်း သတိဖြင့် စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းပါ၏ အရှင်မြတ်စွာဘုရား။
စေတီတိုင်းမှာ ဖူးမြော်ရာ ဗုဒ္ဓလကျာ် မှတ် သားကာ လကျာ်ရစ်ခွေ ဖူးကြပါ။
(၁) ဦးစွာပထမ (အရှေ့အရပ်) ကကုသန္ဓ ဘုရားဖူးကြပါ။
(၂) ဒုတိယမှာ (တောင်အရပ်) ကောဏာ ဂမဏဘုရား ဖူးကြပါ။
(၃) တတိယမှာ (အနောက်အရပ်) ကဿပ ဘုရား ဖူးကြပါ။
(၄) စတုတ္ထမှာ (မြောက်အရပ်) ဂေါတမ ဘုရား ဖူးကြပါ။
သိထား မှတ်ထားရန် ခံစားရန်အဓိပ္ပာယ် အကျဉ်း
ရှိခိုးသည် = လေးစားရိုသေပါသည် ဘုရား။
ပူဇော်သည် = ဝတ္ထုပစ္စည်းများ ကပ်လှူ ပါသည်ဘုရား။
ဖူးမြော်သည် = သက်ရှိထင်ရှား အာရုံပွား ကာ တွေ့ဆုံဆည်းကပ်သည်။
ကန်တော့သည်= မသိအမှား သိ၍အမှား များကို ခွင့်လွတ်ပါစေခြင်း အကျိုးငှာ ဝန်ချတောင်း ပန်ပါသည်။
ယခုဆိုလျှင် စနစ်တကျ အစီအစဉ်အတိုင်း ဘုရားဖူးနိုင်ရန် မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏ တည်နေရာပြ မြေပုံအညွှန်းနှင့် သရဏဂုံတည်ခြင်း အကျဉ်းအားဖြင့် သီလတည်ဆောက်ခြင်းများနှင့် ခံစားရန် အဓိပ္ပာယ် အကျဉ်းများကို သိရပြီဖြစ်သောကြောင့် ပွဲဝင်ရန် အဆင်သင့် ဖြစ်ပါပြီ။ မြေပုံအညွှန်းအတိုင်း ရှင်တော် ဂေါတမ အာရုံခံတန်ဆောင်းမှ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး အရှေ့ အရပ်ရှိ ကကုသန္ဓဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရား၏ နိမ္မိတ ရုပ်ပွားတော် အာရုံခံတန်ဆောင်းသို့ ဝင်ရောက်ကာ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီး ရှေ့တူရှုတွင် နေရာယူ ထိုင် လိုက်ပါသည်။
အသင့်ယူဆောင်လာသော တံခွန်ကုက္ကား များထဲမှ တစ်စုံကို ထုတ်ယူလိုက်ပြီး (တံခွန် ကုက္ကား ဆိုသည်မှာ အနေကဇာ တင်သောအခါ ဘုန်းတော် ကြီးများ ကိုင်၍ပူဇော်သော တံခွန်ကုက္ကား အသေး တစ်စုံဖြစ်ပါသည်။ ရွှေထီးကြီး ငွေထီးကြီး တံခွန်လုံး ကြီးများ မပါဝင်ပါ။ ထိုတံခွန်ကုက္ကားတွင် အုန်းတစ် ညွှန့်၊ သပြေတစ်ညွှန့်၊ မိမိမွေးနံ ပန်းတစ်ညွှန့်ကို အသေအချာ ပူးတွဲချည်ရပါမည်။ ကြိုတင်ဝယ်ပြီး ကြိုတင်စီစဉ်ယူလာရပါမည်။ ရွှေတိဂုံတွင် လေးစုံ၊ ?ဗိုလ်တထောင်တွင် လေးစုံ၊ ပေါင်း ရှစ်စုံ ဝယ်ရ ပါမည်)
လက်အုပ်ချီမိုးကာ ယခုလို ရှိခိုးကန်တော့ ပါသည်။
(နမောတဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ)၃
– ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ (ဒု/တ) ထည့်ဆိုပါ)
– ဥပေမိ ဗုဒ္ဓံသရဏံ၊ ဓမ္မံသံဃဉ္စ နတ္တရံ၊ သမာ ဒိယာမိ သီလာနိ။
– ဘန္တေအရှင်ဘုရား၊ ရိုသေစွာဖြင့်လျှောက် ထားအပ်ပါသည် ဘုရား။
– ဘုရားတပည့်တော်သည် ဤနေရာ ဤ ဋ္ဌာနမှ နေ၍ ကကုသန္ဓ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအား
သက်ရှိထင်ရှား အာရုံပွားကာ သဒ္ဓါကြည်ညို မြတ်နိုးယုံကြည်စွာဖြင့် ရှိခိုးပါ၏၊ ကန်တော့ပါ၏၊ ပူဇော်ပါ၏၊ အောင်တံခွန်များ၊အောင်ပန်းများ (ကပ် လှူပါ၏)၃ (အလှူခံယူတော်မူပါ အရှင်ဘုရား)၃။
(ဣဓံမေပုညံ၊ နဗ္ဗာ နိဿ ပစ္စယော ဟောတု)၃
ယခုအခါက ကုသန္ဓ ဗုဒ္ဓထံမှောက်၌ သစ္စာ အဓိဋ္ဌာန်ပါရမီဝတ်ကို ဖြည့်ဆည်းပြီးဖြစ်ပါသည်။ မြေပုံအညွှန်းအတိုင်း ကောဏာဂမဏ အာရုံခံ တန် ဆောင်းသို့ သွားရပါမည်။ ဆိုရမည့် နေရာများတွင်၊ ကကုသန္ဓ ဘွဲ့တော်နေရာ၌ ကောဏာဂမဏ ဘွဲ့ တော် ပြောင်းလဲ ဆိုသွားရပါမည်။ ယခုသဘော အတိုင်း (ကဿပဗုဒ္ဓ) (ဂေါတမဗုဒ္ဓ) ဘွဲ့တော်များကို လည်း ပြောင်းလဲရွတ်ဆိုရမည်ဟု နားလည်စေချင်ပါ သည်။
အစီအစဉ် (၂)- ဆူးလေစေတီ
ယခုအခါ ဆူးလေစေတီတော်သို့ သွားရပါ မည်။ မြေပုံအညွှန်းအတိုင်း အရှေ့အရပ်ရှိ စေတီ တော် ခြေရင်းမှာရပ်ပြီး ရွှေတိဂုံဓာတ်လှေကားအနီး ညောင်ပင်အောက်မှ သိင်္ဂုတ္တရကုန်းတော်ပေါ်ရှိ မြတ် စွာဘုရားများကို ဂါရဝပြုသကဲ့သို့ ဆူးလေစေတီ တော်တွင် သီတင်းသုံးနေတော်မူသော မြတ်စွာ ဘုရားများကို ဂါရဝပြုရပါမည်။ ခွင့်ပန်ကြားရပါမည်။ အပ်ရာဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ် အပေါင်းတို့ကိုလည်း ခွင့်ပန် ကြားရပါမည်။ ဂါရဝပြုရပါမည်။
(ဆူးလေစေတီတော်တွင် မြတ်ဘုရား လေးဆူ ကို ရေလှူရပါမည်။ တစ်ဆူလျှင် တစ်ခါသုံး ရေခွက် နှင့် အောက်ခံပန်းကန်ပြား (ဘုရားတစ်ဆူ တစ်စုံ) အားလုံး လေးစုံ။ အိမ်မှ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ယူခဲ့ပါရန်။ ရွှေတိဂုံမှာဆိုတုန်းက အောင်တံခွန်အောင်ပန်းများ လှူပါသည်ဟု ဆိုခဲ့ပြီး။ ယခု သောက်တော်ရေချမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပါသည်ဟု ဆိုရပါမည်။ ရွှေတိဂုံ စေတီမှာကဲ့သို့ (ကကုသန္ဓ)ပြီးလျှင် (ကောဏာဂ မဏ)၊ (ကဿပ) (ဂေါတမ)ဟု ပြောင်းလဲထည့်ဆို သွားရပါမည်။
ဆူးလေစေတီ အစီအစဉ်ပြီးပါက ပုဇွန်တောင် မြို့နယ် ရေကျော်ရပ်ကွက်ထဲက ရွှေဘုန်းပွင့် စေတီ တော်သို့ သွားရပါမည်။
ရွှေဘုန်းပွင့်စေတီ မုခ်ဦးရှေ့မှာရပ်ပြီး ရွှေတိဂုံ စေတီ၊ ဆူးလေစေတီတော်တို့မှာကဲ့သို့ ပဏာမ ဂါရဝ ပြုရပါမည်။ မြေပုံအညွှန်းကို ကြည့်ပါ။ တနင်္လာ ဂြိုဟ်တိုင် အရှေ့အရပ်ကို တွေ့ရလျှင် (ကကုသန္ဓ ဗုဒ္ဓ) ကို ရည်စူးကန်တော့ရပါမည်။ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်တိုင် က တောင်အရပ်၊ (ကောဏဂမဏ)၊ ကြာသပတေး ဂြိုဟ်တိုင်က အနောက်အရပ်၊ (ကဿပဗုဒ္ဓ)၊ သော ကြာဂြိုဟ်တိုင်က မြောက်အရပ် (ဂေါတမ)။
ရွှေဘုန်းပွင့် စေတီတော်တွင် နံ့သာတိုင် သုံးတိုင်စီ လှူရပါမည်။ ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး မမှည့် တမှည့်ကို ဝယ်ပါ။ အကွင်းကလေး လေးခုကွင်းလိုက် ပါ။ အကွင်းတစ်ကွင်းစီပေါ်တွင် နံ့သာတိုင်သုံးတိုင်ကို ထိုးစိုက်ပြီး ဘုရားတစ်ဆူချင်းစီတွင် လှူသွားနိုင် ပါသည်။ ရွှေဘုန်းပွင့် စေတီတော်တွင် အောင်နန်းစံ ပျော် သူတော်စင်များ သီတင်းသုံးနေပါသော နန်း ဆောင်ကြီးရှိပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးစီတွင် နံ့သာတစ် တိုင်၊ ငှက်ပျောကွင်းကလေးတွင် ထိုးစိုက် လှူဒါန်း ပါလေ။ လှူပြီးတိုင်း လိုရာအသုံးပြုရန် ဒါနပြုပါသည်။ လိုရာအသုံးပြုတော်မူပါဗျား။ (ဣဓံမေ ပုညံ၊ နိဗ္ဗာနဿပစ္စယော ဟောတု)၃ လို့ စိတ်ပါလက်ပါ ဆိုပါ လေ။
မြတ်စွာဘုရာများကို လှူတော့ ဘယ်လို ဆိုရမလဲ။ မေ့မသွားဖို့ သတိပေးပါရစေ။ ရွှေတိဂုံမှာ လို ဆူးလေမှာ လိုဆိုပေါ့။ ဟုတ်ကဲ့ …။ ပြီးရင် ဗိုလ်တထောင်စေတီတော်သို့ သွားကြပါစို့။
အစီအစဉ် (၄) ဗိုလ်တထောင်စေတီ
ဗိုလ်တထောင်စေတီတော်၏ မုခ်ဦးအဝမှာ ရပ်ပြီး စေတီတော်အတွင်းမှာ သီတင်းသုံးနေတော် မူကြသော မြတ်စွာဘုရားများအား ဂါရဝပြုရပါမည်။ ခွင့်ပန်ရပါမည်။ သစ္စာအဓိဋ္ဌာန် ပါရမီဝတ် ဖြည့် ဆည်းခြင်းအတွက် နေရာထိုင်ခင်းများ၊ ခွင့်ပြုတော် မူကြပါရန် အပ်ရာဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့ကိုလည်း ခွင့်ပန်ရပါမည်။ သည်မှာလည်း ဘယ်လိုခွင့်ပန် ရမှာလဲ။
ရွှေတိဂုံမှာ၊ ဆူးလေမှာ၊ ရွှေဘုန်းပွင့်မှာလို ပေါ့။ မုခ်ဦးမှဝင်လိုက်ပြီး ဆံတော်တိုက်သို့မဝင်ဘဲ မိမိ၏ဘယ်ဘက်သို့ ကွေ့ဝင်လိုက်ပါ။ တနင်္လာဂြိုဟ် တိုင်ကို တွေ့ပါမည်။ ထိုအခါ …
ရွှေဘုန်းပွင့်မှာကဲ့သို့ဟူ၍ သဘောပေါက် လိုက်ပါရန်။ ဗိုလ်တထောင်တွင် ဘာလှူရမလဲ။ ရွှေ တိဂုံမှာတုန်းက ပြောခဲ့ပါတယ်နော်။ တံခွန်ကုက္ကား တစ်စုံစီ လှူရမယ်လို့ …ဟုတ်။
အုန်းတစ်ညွန့်၊ သပြေတစ်ညွန့်၊ မိမိမွေး နံပန်းတစ်ညွန့် ပါရမယ်လို့လည်း အမှာရှိခဲ့ပါတယ် နော် …။ သို့ဆိုလျှင် ဗိုလ်တထောင်စေတီတော် တွင်လည်း ယခင် ရွှေတိဂုံ၊ ဆူးလေ၊ ရွှေဘုန်းပွင့် မှာကဲ့သို့ သစ္စာ၊ အဓိဋ္ဌာန်ပါရမီ ဝတ်ကို ဖြည့်ဆည်း နိုင်ပြီပေါ့။ အောင်ပါပြီ။
ရွှေတိဂုံစေတီတော်သို့ အမြန်ပြန်သွားစို့။ ရှင်တော်ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားအား အဓိဋ္ဌာန် အောင်ခဲ့ပါကြောင်း လျှောက်ထားကြပါစို့။ “ဣဓံမေ ပုညံ နိဗ္ဗာနဿ ပစ္စယောဟောတု” လို့ဆန္ဒဖော်ကျူး လျှောက်ထားကြပါစို့။ ဆုတောင်းကြပါစို့။ ဗြဟ္မာ သိကြား၊ ဘိုးတော်ကြီးများနဲ့ ရွှေတိဂုံဘိုးဘိုးကြီးတို့ကို လည်း သက်သေအရာ ရှိခဲ့ကြခြင်းကို ကျေးဇူးတင် စကားများ ပြောကြပါစို့။ ကုသိုလ်များကို မျှဝေပေးကြ ပါစို့။ ရွှေတိဂုံ စေတီတော်သို့ သဒ္ဓါရွှင်လန်းဝမ်းပန်း တသာ သွားကြပါစို့။
ရွှေတိဂုံ စေတီတော် အရှေ့မုခ်ဓာတ်လှေ ကားမှ တက်ခဲ့ပြီး မနက်ကကဲ့သို့ တနင်္လာဂြိုဟ်၊ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်တိုင်များကို ဖြတ်ကျော်လျှောက်ခဲ့ ပြီးနောက် သောကြာဂြိုဟ်တိုင်နှင့် ကပ်လျက်ရှိပါ သော၊ မြတ်စွာဗုဒ္ဓ ဂေါတမ အာရုံခံတန်ဆောင်းတော် ကြီးအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီး ယခုလို လျှောက်ထား ရပါမည်။
– ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။
– ဒုတိယမ္ပိ ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဒုတိယမ္ပိ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ဒုတိယမ္ပိ သံဃံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ။
– တတိယမ္ပိ ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ တတိယမ္ပိ ဓမ္မံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ တတိယမ္ပိ သံဃံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ။
– ဥပေမိ ဗုဒ္ဓံသရဏံ၊ ဓမ္မံသံဃဉ္စ နတ္တရံ၊ သမာဒိ ယာမိ သီလာနိ။
ဘန္တေအရှင်ဘုရား၊ ရိုသေစွာဖြင့် လျှောက် ထားအပ်ပါသည်ဘုရား။
ဘုရားတပည့်တော်သည် အရှင်မြတ်ထံ၌ သစ္စာ အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်း (ရွှေတိဂုံစေတီ) (ဆူးလေစေတီ) (ရွှေဘုန်းပွင့်စေတီ) (ဗိုလ်တထောင် စေတီတော်)တို့တွင် သီတင်းသုံးလျက်ရှိတော်မူကြ ကုန်သော မြတ်စွာဘုရား လေးဆူတို့အား ယခုအခါ ပူဇော် ရှိခိုးကန်တော့ပြီး ဖြစ်ပါသည်ဘုရား။
သရဏဂုံသုံးပါး ဆောက်တည်ခဲ့သော ကု သိုလ်၊ ငါးပါးသော သီလတော်များ ဆောက်တည်ခဲ့ သော ကုသိုလ်၊ အောင်တံခွန်များ၊ အောင်ပန်းများ၊ အောင် သောက်တော်ရေချမ်းများ၊ အောင် နံ့သာတိုင် များ လှူဒါန်းခဲ့သော ကုသိုလ်များနှင့် သစ္စာအဓိဋ္ဌာန် ပါရမီဝတ်ကို သတ်မှတ်ချိန်ကာလအတွင်း အောင် မြင်စွာ ဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့သော ကောင်းမှုများ၏ အကျိုး အားသည် ဒုက္ခခပ်သိမ်း၊ ဒေါသခပ်သိမ်းတို့ ကင်းရာ ငြိမ်းရာ ချုပ်ရာ သိမ်းရာ ဖြစ်တော်မူပါသော၊ အသင်္ခတဓာတ်နိဗ္ဗာန်မြတ်သို့ ရောက်ပါစေကြောင်း၊ ကောင်းသော အထောက်အပံ့ (ဖြစ်ပါစေသတည်း)၃ အရှင်မြတ်စွာဘုရား။ (နိဗ္ဗာနဿ ပစ္စယော ဟော တု)၃
ထို့နောက် သဒ္ဓါရွှင်လန်းဝမ်းသာစွာနှင့် (၁) သက်သေအရာ၌ တည်ရှိပေးခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ နတ်မင်းကြီးများနှင့် အမိအဖများ၊ (၂) ဝသုနြေ္ဒ နတ် မင်းကြီးနှင့် ငရဲသနင်း ယမမင်းကြီး၊ (၃) ၃၁ ဘုံသား အားလုံးတို့ကို …မိမိ၏ရင်တွင်းဖြစ် စကားနှင့် အမျှ ပေးဝေ ဒါနပြုပါသည်။ ပြီးသော် …လေးလေး နက်နက် ယုံယုံကြည်ကြည် ဝမ်းသာအားရ ဤသို့ ရင့်ကျူးဆန္ဒပြုလိုက်ပါ၏။
ဣဓံ မေ ပုညံ။
(နိဗ္ဗာ နဿ၊ ပစ္စယော ဟောတု)၃
သမ္မာဆန္ဒဟူသမျှ၊ ပြည့်ဝချမ်းသာ အောင် ကြပါစေ၊ အောင်ပါစေသော်ဝ်
** ပါရမီရှငျဆရာပုဏ်ဏက **
ရှဈဆယျ့ရှဈ အရေးတျောပုံကွီး စဖွဈက တညျးက အနုပညာလုပျငနျးတှေ အလုပျမဖွဈတော့ လို့ စားဝတျနရေေးတှေ ကပျြတညျးခဲ့တာ အရေး တျောပုံတှေ ကိုယျရှိနျသတျလို့ နိုငျငံတျော ငွိမျဝပျပိ ပွားမှု တညျဆောကျရေးဆိုတဲ့ စကားလုံးသဈကွီး ထှနျးကားလာတဲ့ အခြိနျအထိ အနုပညာ လုပျငနျး တှကေ ယောငျလညျလညျ ဖွဈနတေုနျးပါပဲ။
အိမျရှငျမ “ညှနျ့မေ”ရဲ့ အမွျောအမွငျကွီးမှု တှကွေောငျ့သာ အိမျဆိုငျကလေး ဖှငျ့ဖွဈခဲ့လို့ သီခငျြး မရေးရလညျး ထမငျးနပျမှနျတော့ စားဖွဈခဲ့ရပါရဲ့။ သီခငျြးရေးရမှ ထမငျးလညျးစားရ၊ အိမျထောငျရေး လညျး အဆငျပွေ။ သီခငျြးမရေးရတော့ ဝငျငှမေရှိ။ လူမှုစရိတျတှကေိုလညျး အပွအေလညျ မရှငျးလငျး နိုငျတော့ ဘဝကလညျး ဂယောငျခြာခြာ။ စိတျက လညျး ဂယောငျခြောကျခြား။ ဟုတျတိပတျတိလညျး အဓိဋ်ဌာနျတှမေဝငျဖွဈ။ တညျတညျတနျ့တနျ့လညျး ပုတီးမစိပျဖွဈ။ အိမျမှာလညျး ငွိမျငွိမျ ထိုငျမနေ တတျ။ ရှတေိဂုံ၊ ဆူးလေ၊ ရှဘေုနျးပှငျ့၊ ဗိုလျတ ထောငျ စတေီတှေ ဆီသှားလိုကျ ဟိုနားထိုငျ သညျ နားထိုငျ ပွနျလာ။ အဲသညျလို ဖွဈနခြေိနျ … မဃေဝတီဆရာတျောကွီးက အဓိဋ်ဌာနျတဈခု ဝငျခိုငျး ခဲ့တာကို အမှတျတရ ရှိမိနတေယျ။ သတိတရ ဖွဈမိ နပေါတယျ။
ကြေးဇူးတျောရှငျ မဃေဝတီဆရာတျော ကွီး ဘဝနတျထံသို့ ကွှမွနျး စံမွနျးနသေညျမှာ ၂၀၁၈ခုနှဈ၊ အောကျတိုဘာလ ၂၀ ရကျဆိုလြှငျ (၁၅)နှဈ ပွညျ့ပါမညျ။ သကျတျောအားဖွငျ့ ရှိနမေယျဆိုလြှငျ သကျတျော(၁၀ဝ)၊ ရာပွညျ့၊ ကြေးဇူးတျောရှငျ ဆရာသခငျရဲ့ကြေးဇူး အလီလီ။ အထှေ ထှအေပွားပွား မြားလှစှာရှိခဲ့သညျကို သားသမီး မွေးမွဈအပေါငျး ဒကာ၊ ဒကာမအပေါငျးတို့က “ဂုဏျရညျရညျစူး၊ အထူး ပူဇျောပှဲကွီးကို မဃေဝတီ ကြောငျးတျောကွီးတှငျ ပေါငျးစုလို့ ကောငျးမှုပွုရနျ စီစဉျနကွေပွီဆိုတာ နစေ့ဉျနှငျ့အမြှ ကွားသိနရေ သညျကွောငျ့လညျး၊ ဆရာတျောကွီးရဲ့ ကြေးဇူးတှေ ကို ပိုမိုသတိရခွငျးတှေ ဖွဈမိနရေပါတော့တယျ။
အမှတျတရ မြားစှာတှထေဲက အမှတျတရ တဈခုရဲ့ အဆနျးတကယျြ ဖွဈမှုတဈခုကို ယနတေို့ငျ ခံစားနရေပွီး သတိတရ ဖွဈမိတိုငျး၊ ခံစားရတိုငျး လညျး ဆရာတျောကွီး စခေိုငျးတဲ့အတိုငျး အဓိဋ်ဌာနျ တှေ ယနထေ့ကျတိုငျ တဈမြိုးမဟုတျတဈမြိုး ဝငျ လကျြရှိနမေိပါသညျ။
ဆရာတျောကွီး စချေိုငျးတဲ့ အဓိဋ်ဌာနျကို တဈပတျတဈကွိမျ၊ သုံးကွိမျမွောကျ ဝငျလို့လညျး ပွီးရော ကြှနျတျော့ ဘဝအပွောငျးအလဲတှကေ မယုံ နိုငျလောကျအောငျ ပွောငျးလဲသှားခဲ့တာ။ အခုပွနျ တှေး အခုကွကျသီးတှထေ၊ အခုအံ့ဩ? အခု မယုံ နိုငျစရာ ဖွဈနရေပွီး အဲသညျလို ဖွဈရတိုငျးလညျး ဆရာတျောကွီးရဲ့ ကြေးဇူးဂုဏျတှကေို ရညျမွျောမှနျး ဆ ဦးနှိမျခကြာ ရှိခိုးမိလိုကျသညျခညျြး ဖွဈနရေပါ သညျ။
ဆရာတျောကွီး စခေိုငျးတဲ့ အဓိဋ်ဌာနျက ရိုး ရိုးကလေးပါပဲ။ ကြှနျတျောသှားနကြေ ရှတေိဂုံ၊ ဆူးလေ၊ ရှဘေုနျးပှငျ့၊ ဗိုလျတထောငျစတေီတျော တှကေို အစီအစဉျအတိုငျးသှား၍ အဓိဋ်ဌာနျပွုပွီး နေ့ ခငျြးပွီး ဖူးမွျောလှူဒါနျး ရတာပါ။ ကြှနျတျော့အဖို့ အမှတျတရ အဆနျးတကယျြလညျးဖွဈ၊ အံ့ဩခွငျး ဖွဈရတာလညျး နှဈခုရှိနပေါတယျ။ တဈခုက အဓိဋ်ဌာနျ တှဝေငျပွီးတိုငျး ဆုအမြိုးမြိုး ကြှနျတျောတောငျးတတျ လရှေိ့တယျဆိုတာကို ဆရာတျောကွီး ကွိုတငျသိနေ ခွငျးကို ပွနျတှေးမိတော့ ရယျစရာကွီး ဖွဈရတာ လညျးရှိရဲ့။
“ကြှနျတျော့ကို ‘ညှနျ့မေ’ သဝနျတိုခွငျး တှေ ကငျးပါစေ။ ရနျဖွဈကွခွငျး ဘေးဆိုးမြားမှ ကငျးဝေးရပါစေ”
“စကားမပွော နားမကွားကွတဲ့ ကလေး လေးတှရေဲ့ ကြောငျးစရိတျ၊ စားစရိတျတှေ ပွလေညျ အောငျ ငှတှေရေခငျြပါတယျ၊ သီခငျြးတှေ အမြားကွီး ရေးခိုငျးသူတှနေဲ့ အမွနျတှရေ့ပါစေ”
“သီခငျြးတှရေေးတဲ့ အလုပျက စားရေး ဝတျ ရေးတှေ မပွညျ့စုံပါဘုရား၊ သိဒ်ဓိရှငျ မဟိဒ်ဓိရှငျတှေ လို ဥုံဖှ ဆိုတာနဲ့ အကုနျရတဲ့ ပုဏ်ဏက ဖွဈခငျြ ပါတယျဘုရား”
အဲသညျလို ဆုတောငျးလရှေိ့တာကို ဆရာ တျောကွီး ဘယျလိုသိသလဲ မပွောတတျပေါငျဗြာ။
“လူကလေး ပုဏ်ဏက …အဓိဋ်ဌာနျပါရမီ ဆောကျတညျတိုငျး ပေါကျတောကျကရ ဆုတောငျး တာတှေ မလုပျရဘူး” “အသအေခြာ နားထောငျပါ၊ လိုကျနာပါ လူကလေး”
“ဣဓံမပေုညံ နိဗ်ဗာနဿ ပစ်စယောဟောတု”လို့သာ ဆိုပါ။ ဆုတောငျးပါ လူကလေး။ နိဗ်ဗာနျ သို့ ရောကျကွောငျး ကောငျးသော အထောကျအပံ့ ဖွဈပါစလေို့ ဆန်ဒပွုထားမှတော့ ကနျြတဲ့ ဖွဈခငျြမှု ဆန်ဒအသီးသီးတှဟော စီကာစဉျကာ ဖွဈလာတတျ အကြိုးပေးလာတတျပါတယျ ဆိုတာ အလေးအနကျ ယုံကွညျထားဖို့ လိုအပျတယျကှယျ့”
“သစ်စာ အဓိဋ်ဌာနျ ပါရမီဖွညျ့ဆညျးရာမှာ ဆန်ဒလညျး ရှိရမယျ။ မပကျြမယှငျး မကြိုးမပေါကျတဲ့ သစ်စာလညျး တညျရမယျ။ ဆုတောငျးလညျး မှနျရ မယျ”
မှတျထားနျော လူကလေး။ “နိဗ်ဗာ နဿ ပစ်စယောဟောတု”။ ဆရာတျောကွီးရဲ့ အမှာစကား မြားက အခုပငျကဲ့သို့ နားထဲမှာကွားယောငျမိကွား မိနသေညျဖွဈနပေါသညျ။ အမှတျတရ နောကျတဈ ခုက ပုဏ်ဏက တဈယောကျ ?မမြှျောလငျ့ဘဲ ရငျးနှီး လုပျကိုငျစားဖို့ ငှကွေေးတှေ အကူအညီရရှိခဲ့ပွီး ဝငျဒါမီယာ သံလှငျလမျးမကွီးပျေါမှာ အတျော့ကို ထငျရှားခဲ့တဲ့ အောငျမွငျခဲ့တဲ့ ပုဏ်ဏက “လဖရေ့ေ” ဆိုငျဖှငျ့နိုငျပွီး ပွလေညျခဲ့ရတဲ့အဖွဈ။ (နခေ့ငျြးညခငျြး တော့မဟုတျ) သုံးလလောကျမှ ဖွဈခဲ့ရတဲ့ အမှတျ တရ တဈခုပါဗြာ။
အဲသညျ့ အမှတျတရကလေးနှဈခုအတှကျ ကြှနျတျော အဓိဋ်ဌာနျဝငျခဲပုံကလေးကို ပွောပွခငျြ တာပါ။ အသေးစိပျကို ပွောပွခငျြတာပါ။ ကြှနျတျော့ လို အကပျြအတညျး ကွုံတှနေ့ကွေသူမြား ရှိနပေါ က ကြှနျတျော့လိုပဲ ကွုံတှနေ့တေဲ့ အကပျြအတညျး တှထေဲက လှတျမွောကျ အေးခမျြးစခေငျြတဲ့ ဆန်ဒ တှေ ရငျထဲမှာ ဖွဈပျေါလာလို့ပါ။ နောကျတဈခုက ဆရာတျောကွီးကို လှမျးလို့။ အလှမျးပွကြေေးဇူး ဂုဏျရညျတှေ ရညျစူးဖူးမွျောကွညျညို ကြေးဇူးဆပျ ခငျြလို့?ဆရာတျောကွီး ဝငျခိုငျးတဲ့ အဓိဋ်ဌာနျဝငျနညျး ကလေးတဈခုကို ရေးပွခငျြတာပါ။ သူတျောကောငျး ပရိသတျတို့အတှကျ တနျဖိုးကွီးကွီး ရလိမျ့မယျလို့ ယုံကွညျမိပါကွောငျး။ ခေါငျးစဉျက …
“နိဗ်ဗာ နဿ ပစ်စယော ဟောတု”
သညျကနေ့ အဓိဋ်ဌာနျဝငျရမညျ့နေ့၊ ရှတေိဂုံ စတေီတျော အရှမေု့ချရှိ ဓာတျလှကေား ရှသေို့ မနကျ လေးနာရီကြျောကြျောထဲက ရောကျနခေဲ့ သညျ။ ဓာတျလှကေားသညျ တဈခါတဈရံ လေးနာ ရီခှဲတှငျ ဖှငျ့သညျ။ တဈခါတဈရံမှာတော့ ငါးနာရီမှ ဖှငျ့တတျသညျဟု သတိထားမိပါသညျ။ အမြားအား ဖွငျ့ စောငျးတနျးမှသာ သှားသှားလာလာ ရှိခဲ့ပါသော ကွောငျ့ ဓာတျလှကေား အခြိနျကို မသိခဲ့။ မသိခဲ့ သောကွောငျ့သာ ယခုကဲ့သို့ စောစောလာခဲ့ခွငျး ဖွဈပါသညျ။
ကြှနျတျော့ထကျ ဝီရိယကောငျးသော ဘုရားဖူး ပရိသတျကို တှရေ့သညျ။ ဆယျယောကျခနျ့ ရှိမညျ ထငျပါသညျ။ ကြှနျတျောက ဓာတျလှကေား အနီးရှိ ညောငျပငျကွီး အောကျသို့ လြှောကျခဲ့သညျ။ အဓိဋ်ဌာနျ ဝငျရာတှငျ အသုံးပွုမညျ့ ပစ်စညျးမြား၊ လှူမညျ့ တံခှနျ ကုက်ကားမြားပါသော ပလတျစတဈ ခွငျးကလေးကို မွသေို့ခကြာ ခွအေစုံကို ရပျသညျ။ လကျအစုံကို ဦးထိပျမှာ မိုးသညျ။ ရှေ့၌ရှိသော သိင်ျဂုတ်တရကုနျး တျောပျေါမှ ရှတေိဂုံစတေီတျောကွီးကို လှမျးမွျော ကွညျညိုပွီး မကျြလုံးကို ဖှဖှမှိတျကာ အာရုံကို စုစညျး လိုကျပွီးနောကျ ပဏာမ ဂါရဝပွုပါသညျ။
ဩကာသ-ဩကာသ – ဩကာသ (နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ်မာသမ်ဗု ဒဿ)၃
ဗုဒ်ဓမွတျစှာ ဘုရားရှငျတျောမွတျတို့အား ဤ နရောမှ ဤဌာနမှ နပွေီးသကျရှိ ထငျရှားအာရုံ ပှားကာ ရိုသစှောဖွငျ့ ရှိခိုးပါ၏။ ကနျတော့ပါ၏။ ခှငျ့ပနျကွား အပျပါ၏ အရှငျဘုရား။ ဘုရားတပညျ့ တျောသညျ သံသရာဝဋျဆငျးရဲ အပေါငျးတို့မှ လှတျ မွောကျပါရစခွေငျး အကြိုးငှာလညျးကောငျး၊ ဒုက်ခ ခပျသိမျး ဒေါသခပျသိမျးတို့မှ ကငျးရာငွိမျးရာ ခြုပျရာ သိမျးရာ ဖွဈတျောမူပါသော အသင်ျခတဓာတျ နိဗ်ဗာနျ မွတျသို့ရောကျပါစကွေောငျးကောငျးသောအထောကျ အပံ့ဖွဈပါစခွေငျး အကြိုးငှာလညျးကောငျး သစ်စာ အဓိဋ်ဌာနျ ပါရမီမြားကို ဆောကျတညျလိုပါသော ကွောငျ့ အရှငျမွတျစှာဘုရားမြား ရှတေ့ျောမှောကျသို့ ဦးနှိမျမာနျခြ ရောကျလာခွငျး ဖွဈပါသညျဘုရား။ ဩကာသ ဩကာသ ဩကာသ ခှငျ့ပွုတျောမူပါ ဘုရား… ခှငျ့ပွုတျောမူပါဘုရား ခှငျ့ပွုတျောမူပါ ဘုရား။
(သမ်ဗုဒ်ဓေ ဂါထာတျောကွီး ဆကျဆိုက ပိုကောငျးပါသညျ။ အဲသညျ့တုနျးက မဆိုတတျသေး ၍ မဆိုဖွဈခဲ့ပါကွောငျး)
ရှတေိဂုံစတေီတျောကွီးနှငျ့ အပျရာဆိုငျရာ ပုဂ်ဂိုလျအပေါငျးတို့အား ရညျစူးပွီး ရိုသစှောဖွငျ့ ခှငျ့ပနျ ကွားအပျပါသညျဗြား။
ဘုရား?တရား သံဃာ?ရတနာမွတျသုံးပါးတို့ အား အမှနျတကယျ ယုံကွညျစှာ လေးစားစှာဖွငျ့ ကိုးကှယျဆညျးကပျပါသော (မိမိ၏ မှေးနံကိုထညျ့ရနျ) ဥပမာ – (တနင်ျလာနဖှေ့ား) ကြှနျတျောသညျ ရှတေိဂုံ စတေီတျောကွီးတှငျ သစ်စာအဓိဋ်ဌာနျ ပါရမီဝတျတို့ကို ဖွညျ့ဆညျးလိုပါသောကွောငျ့ (နရောထိုငျခငျးမြား ခှငျ့ပွုတျောမူပါရနျ)၂ ရိုသစှောဖွငျ့ ခှငျ့ပနျကွား လြှောကျထားအပျပါ၏။
(တသေံ) = ဆိုခဲ့ပွီးသော ပုဂ်ဂိုလျအပေါငျး တို့သညျ (အံဟံ) = ပါရမီရှငျ သားတပညျ့၏ ရိုသေ သမှု ဂါရဝပွုမှုမြားတို့ကို စံမွနျးကွရာ?ဘုံဗိမာနျနနျး စခနျးအသီးသီးမှနေ၍ ကွားကွပါစေ၊?သိကွပါစေ၊ မွငျကွပါစေ၊? တှကွေ့ပါစေ၊ ကနျြးမာကွပါစေ၊ ခမျြးသာကွပါစေ၊?ဘေးရနျခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ။ နှလုံးစိတျဝမျး ငွိမျးခမျြးကွပါစသေတညျး။
ဂါရဝ အစီအစဉျမြား ပွီးဆုံးလို့ မကွာမီမှာပဲ ဓာတျလှကေားဖှငျ့သညျကွောငျ့ ရငျပွငျတျောပျေါသို့ ရောကျရနျ ဓာတျလှကေားနှငျ့ တကျခဲ့သညျ။ နတျ လမျးအတိုငျး လြှောကျခဲ့ပွီး ထှကျပေါကျရောကျတော့ ညာဘကျကို ခြိုးကှကေ့ာ အနညျးငယျ လြှောကျ လိုကျသောအခါ အရှမေု့ချစောငျးတနျးမှ တကျလာ သညျ့ လှကေားမြား အဆုံးရှိ ရငျပွငျနှငျ့ ထိပျတိုကျ ဆုံသညျ။ ဘယျဘကျကို ခြိုးကှပွေီ့း ဆယျလှမျးမြှ လှမျးပွီးနောကျ ညာဘကျသို့ ထှကျလိုကျသျော ရှတေိဂုံ ရငျပွငျကယျြကွီးပျေါသို့ ရောကျပါပွီ။
တနင်ျလာဂွိုဟျတိုငျနှငျ့ တနင်ျဂနှဂွေိုဟျတိုငျမြားကို ကြျောဖွတျပွီးနောကျ သောကွာဂွိုဟျတိုငျသို့ ရောကျသောအခါ ရှငျတျော ဂေါတမ မွတျစှာဘုရား သီတငျးသုံးတျောမူရာ အာရုံခံ တနျဆောငျးသို့ ဝငျရနျ လှကေား ငါးထဈမြှကို လှမျးနငျးပွီး တနျဆောငျးတှငျး ရှိ ရှငျတျော ဂေါတမမုနိ ရုပျပှားတျောရှေ့ တူရူတှငျ နရောယူ ထိုငျလိုကျပါသညျ။
သံဃာစငျပျေါတှငျ သံဃာတျော နှဈပါးတို့ နရောယူ ဘုရားဝတျပွုနပေါသညျ။ မိသားစုတဈစု တို့သညျလညျး ဆှမျးတျောကပျနေ၏။ ကြှနျတျော လညျး အစီအစဉျ (၁)အရ သစ်စာအဓိဋ်ဌာနျပွုရနျ လကျအစုံ ဦးထိပျမိုးပွီး အောကျပါတို့ကို ဆိုပွီး ရှိခိုး ပါသညျ။ ကနျတော့ပါသညျ။ ပူဇျောပါသညျ။
အစီအစဉျ နံပါတျ (၁)
(သစ်စာ အဓိဋ်ဌာနျ ပန်နကျတညျခွငျးနှငျ့ သစ်စာ အဓိဋ်ဌာနျ ပါရမီဝတျဖွညျ့ဆညျးခွငျး)
(နမော တသ ဘဂဝတော အရဟတော သမ်မာ သမ်ဗုဒ်ဓဿ) သုံးကွိမျဆိုပွီးနောကျ ဩကာသ အစခြီ ကနျတော့ခြိုးဖွငျ့ ဘုရားရှိခိုးပါသညျ။ ငါးပါး သီလ ခံယူဆောကျတညျပွီးသျော အောကျတှငျ ဖျော ပွပါ ရှိသညျတို့ကို ဆိုပါသညျ။)
ဘုရားတပညျ့တျော သစ်စာပွုပါသညျ အဓိဋ်ဌာနျပွုပါသညျ ဘုရား။ ဘုရားတပညျ့တျောသညျ သံသရာဝဋျဆငျးရဲ အပေါငျးတို့မှ လှတျမွောကျပါ ရစခွေငျး အကြိုးငှာလညျးကောငျး၊? ဒုက်ခခပျသိမျး ဒေါသခပျသိမျးတို့မှ ကငျးရာငွိမျးရာ ခြုပျရာသိမျးရာ ဖွဈတျောမူပါသော အသင်ျခတ ဓာတျနိဗ်ဗာနျမွတျသို့ ရောကျပါစကွေောငျး? ကောငျးသော အထောကျအပံ့ ဖွဈပါစခွေငျး အကြိုးငှာလညျးကောငျး မင်ျဂလာရှိ သော ယခု အခြိနျမှ အစပွု၍ ရှတေိဂုံစတေီ၊ ဆူး လစေတေီ၊ ရှဘေုနျးပှငျ့စတေီ၊ ဗိုလျတထောငျစတေီ စုစုပေါငျး စတေီလေးဆူသို့ နခေ့ငျြးပွီး သှားရောကျ ကာ ထိုစတေီမြားတှငျ သီတငျးသုံးလကျြရှိနတေျောမူ ကွပါသော ကကုသန်ဓ ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရား၊ ကောဏာ ဂမဏ ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရား၊ ကဿပ ဗုဒ်ဓမွတျစှာ ဘုရားနှငျ့ ဂေါတမမွတျစှာဘုရားရှငျတို့အား ဖူးမွျော မာနျလြော့ ရှိခိုးပါမညျဘုရား … ကနျတော့ပါမညျ ဘုရား …ပူဇျောပါမညျဘုရား။
ဤမှနျသော သစ်စာစကားကို ဘိုးတျော ဗွဟ်မာ၊ ဘိုးတျော သိကွား၊ ဝိဇ်ဇာ ရှဈသောငျး ဆရာ အပေါငျး၊ ရသရှေ့ဈသောငျး ဆရာကောငျးမြားနှငျ့ ကိုယျစောငျ့နတျမငျးမြား၊ အထူးအစောငျ့အရှောကျ ပုဂ်ဂိုလျမြား၊ ဝသုန်ဒွေ နတျမငျးကွီး၊ ငရဲသနငျး ယမ မငျးကွီးနှငျ့ ရှတေိဂုံဘိုးဘိုးကွီးတို့အား (သကျသပွေု ပါ၏)၃ (သကျသဖွေဈတျောမူကွပါစေ ကုနျသတညျး)၃
(အစီအစဉျ ၁- ရှတေိဂုံ)
ယခုအခါ သစ်စာအဓိဋ်ဌာနျ ပန်နကျတငျပွီးပွီ ဖွဈပါသောကွောငျ့ အစီအစဉျအတိုငျး သစ်စာ အဓိဋ်ဌာနျ ပှဲဝငျရတော့မညျဖွဈပါသညျ။ ထိုစဉျအခါက ကြှနျတျောသညျ သာသနာတျော၌ လိမ်မာယဉျပါးခွငျး မရှိသေးရာကား ကြှနျတျော၏ ဉာဏျရညျအလိုကျ ခြီးမွှငျ့လိုကျသော သစ်စာအဓိဋ်ဌာနျပှဲဝငျနိုငျရနျ စတေီ တျောမြားမှ ဘုရားလေးဆူတျောကို ဖူးမွျောနညျး၊ ခှငျ့ပနျနညျး၊ အကဉျြးနညျးနှငျ့ သရဏဂုံတညျခွငျး၊ သီလဆောကျတညျခွငျး လှူဖှယျဝတ်ထု ကပျလှူရာ တှငျ ဆိုခွငျးစသညျတို့ကို ဆရာတျောကွီးက အသအေခြာ သငျပေးပါသျောလညျး ဉာဏျရညျမမီ သော ကြှနျတျောသညျ အလှယျမှတျ အလှယျခံစားပွီး အဓိဋ်ဌာနျဝငျခဲ့ရပါ၏။ ကြှနျတျော ကံကောငျးခဲ့ပါ၏။ ခြီးမှမျးမခံခဲ့ရသျောလညျး အငေါကျအဆူတော့ မခံခဲ့ ရပါ။
“လူကလေး ပုဏ်ဏက …ဆိုခဲ့တာတှကေ ဟနျတော့မကွီးဘူးကှယျ့။ ဘာသာသာသနာ အမှု ဆိုတာ ပကာသန ဟိတျဟနျတှေ မကွီးသငျ့ဘူး။ မခြဲ့သငျ့ဘူး။ သတိခပျြရမယျ။ ဘာသာ သာသနာ အမှုကိစ်စတိုငျးမှာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို ဦးထိပျ ပနျဆငျရမယျ “သဒ်ဓါ”ဆိုတဲ့ ကံနှငျ့ ကံ၏အကြိုး တရားကို ယုံကွညျမှုဟာ ပဓာန အဓိကကစြရေမယျ။ ဟိတျဟနျတှကွေီးဖို့ အဓိကမကပြါဘူးကှယျ။ စိတျ သဏ်ဌာနျတှကေ ဖွူစငျနရေမယျ။ ရိုးသားရမယျ။ သနျ့ရှငျးရမယျ။ ခနျ့ခနျ့ ထညျထညျ အိန်ဒွတှေေ ရှိရ မယျ”
“စညျးကမျးနဲ့ အဓိပ်ပာယျတှေ မပွညျ့စုံပမေယျ့ ရိုးသားမှုနဲ့ ယှဉျတှဲနတေဲ့ အနီးကပျဆုံး မှနျကနျမှု တှပေါနလေို့ ဂါထာတျောတှအေပျေါ လူကလေးရဲ့ ခံစားမှုဟာ မခြီးမှမျးထိုကျပမေယျ့ ခှငျ့လှတျနိုငျတဲ့ သဒ်ဓါကွညျညိုမှုလို့တော့ အသိအမှတျပွုနိုငျပါတယျ ကှယျ့”
(သဒ်ဓါရှငျတိုငျး ဆိုခငျြရာ မဆို။ ဆိုလိုရငျးကို လိုတို ရှငျးစှာ အဓိပ်ပာယျခံစားပွီး ဆိုခဲ့ ပှဲဝငျခဲ့သော ဂါထာမြား)
အကဉျြးနညျးဖွငျ့ သရဏဂုံတညျခွငျး သီလခံယူ ခွငျးဂါထာ။
ဥပမေိ ဗုဒ်ဓံ သရဏံ၊
ဓမ်မံ သံဃဉ်စ နူတ်တရံ၊
(ဘန်တအေရှငျဘုရား ဘုရား တပညျ့တျော သညျ သရဏဂုံ သုံးပါးနှငျ့တကှ (အင်ျဂါငါးပါး)နှငျ့ ပွညျ့စုံတျောမူပါသော သီလတျောမွတျကို မွတျနိုးစှာ လေးစားစှာဖွငျ့ ဆောကျတညျပါ၏။ ကိုးကှယျဆညျး ကပျပါ၏။ မကြိုးမပေါကျစရေနျလညျး သတိဖွငျ့ စောငျ့ရှောကျထိနျးသိမျးပါ၏ အရှငျမွတျစှာဘုရား။
စတေီတိုငျးမှာ ဖူးမွျောရာ ဗုဒ်ဓလကျြာ မှတျ သားကာ လကျြာရဈခှေ ဖူးကွပါ။
(၁) ဦးစှာပထမ (အရှအေ့ရပျ) ကကုသန်ဓ ဘုရားဖူးကွပါ။
(၂) ဒုတိယမှာ (တောငျအရပျ) ကောဏာ ဂမဏဘုရား ဖူးကွပါ။
(၃) တတိယမှာ (အနောကျအရပျ) ကဿပ ဘုရား ဖူးကွပါ။
(၄) စတုတ်ထမှာ (မွောကျအရပျ) ဂေါတမ ဘုရား ဖူးကွပါ။
သိထား မှတျထားရနျ ခံစားရနျအဓိပ်ပာယျ အကဉျြး
ရှိခိုးသညျ = လေးစားရိုသပေါသညျ ဘုရား။
ပူဇျောသညျ = ဝတ်ထုပစ်စညျးမြား ကပျလှူ ပါသညျဘုရား။
ဖူးမွျောသညျ = သကျရှိထငျရှား အာရုံပှား ကာ တှဆေုံ့ဆညျးကပျသညျ။
ကနျတော့သညျ= မသိအမှား သိ၍အမှား မြားကို ခှငျ့လှတျပါစခွေငျး အကြိုးငှာ ဝနျခတြောငျး ပနျပါသညျ။
ယခုဆိုလြှငျ စနဈတကြ အစီအစဉျအတိုငျး ဘုရားဖူးနိုငျရနျ မွတျစှာဘုရားရှငျတို့၏ တညျနရောပွ မွပေုံအညှနျးနှငျ့ သရဏဂုံတညျခွငျး အကဉျြးအားဖွငျ့ သီလတညျဆောကျခွငျးမြားနှငျ့ ခံစားရနျ အဓိပ်ပာယျ အကဉျြးမြားကို သိရပွီဖွဈသောကွောငျ့ ပှဲဝငျရနျ အဆငျသငျ့ ဖွဈပါပွီ။ မွပေုံအညှနျးအတိုငျး ရှငျတျော ဂေါတမ အာရုံခံတနျဆောငျးမှ ထှကျခှာခဲ့ပွီး အရှေ့ အရပျရှိ ကကုသန်ဓဗုဒ်ဓမွတျစှာ ဘုရား၏ နိမ်မိတ ရုပျပှားတျော အာရုံခံတနျဆောငျးသို့ ဝငျရောကျကာ ရုပျပှားတျောမွတျကွီး ရှတေူ့ရှုတှငျ နရောယူ ထိုငျ လိုကျပါသညျ။
အသငျ့ယူဆောငျလာသော တံခှနျကုက်ကား မြားထဲမှ တဈစုံကို ထုတျယူလိုကျပွီး (တံခှနျ ကုက်ကား ဆိုသညျမှာ အနကေဇာ တငျသောအခါ ဘုနျးတျော ကွီးမြား ကိုငျ၍ပူဇျောသော တံခှနျကုက်ကား အသေး တဈစုံဖွဈပါသညျ။ ရှထေီးကွီး ငှထေီးကွီး တံခှနျလုံး ကွီးမြား မပါဝငျပါ။ ထိုတံခှနျကုက်ကားတှငျ အုနျးတဈ ညှနျ့၊ သပွတေဈညှနျ့၊ မိမိမှေးနံ ပနျးတဈညှနျ့ကို အသအေခြာ ပူးတှဲခညျြရပါမညျ။ ကွိုတငျဝယျပွီး ကွိုတငျစီစဉျယူလာရပါမညျ။ ရှတေိဂုံတှငျ လေးစုံ၊ ?ဗိုလျတထောငျတှငျ လေးစုံ၊ ပေါငျး ရှဈစုံ ဝယျရ ပါမညျ)
လကျအုပျခြီမိုးကာ ယခုလို ရှိခိုးကနျတော့ ပါသညျ။
(နမောတဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ်မာသမ်ဗုဒ်ဓဿ)၃
– ဗုဒ်ဓံသရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊ ဓမ်မံသရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ။ (ဒု/တ) ထညျ့ဆိုပါ)
– ဥပမေိ ဗုဒ်ဓံသရဏံ၊ ဓမ်မံသံဃဉ်စ နတ်တရံ၊ သမာ ဒိယာမိ သီလာနိ။
– ဘန်တအေရှငျဘုရား၊ ရိုသစှောဖွငျ့လြှောကျ ထားအပျပါသညျ ဘုရား။
– ဘုရားတပညျ့တျောသညျ ဤနရော ဤ ဋ်ဌာနမှ နေ၍ ကကုသန်ဓ ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားအား
သကျရှိထငျရှား အာရုံပှားကာ သဒ်ဓါကွညျညို မွတျနိုးယုံကွညျစှာဖွငျ့ ရှိခိုးပါ၏၊ ကနျတော့ပါ၏၊ ပူဇျောပါ၏၊ အောငျတံခှနျမြား၊အောငျပနျးမြား (ကပျ လှူပါ၏)၃ (အလှူခံယူတျောမူပါ အရှငျဘုရား)၃။
(ဣဓံမပေုညံ၊ နဗ်ဗာ နိဿ ပစ်စယော ဟောတု)၃
ယခုအခါက ကုသန်ဓ ဗုဒ်ဓထံမှောကျ၌ သစ်စာ အဓိဋ်ဌာနျပါရမီဝတျကို ဖွညျ့ဆညျးပွီးဖွဈပါသညျ။ မွပေုံအညှနျးအတိုငျး ကောဏာဂမဏ အာရုံခံ တနျ ဆောငျးသို့ သှားရပါမညျ။ ဆိုရမညျ့ နရောမြားတှငျ၊ ကကုသန်ဓ ဘှဲ့တျောနရော၌ ကောဏာဂမဏ ဘှဲ့ တျော ပွောငျးလဲ ဆိုသှားရပါမညျ။ ယခုသဘော အတိုငျး (ကဿပဗုဒ်ဓ) (ဂေါတမဗုဒ်ဓ) ဘှဲ့တျောမြားကို လညျး ပွောငျးလဲရှတျဆိုရမညျဟု နားလညျစခေငျြပါ သညျ။
အစီအစဉျ (၂)- ဆူးလစေတေီ
ယခုအခါ ဆူးလစေတေီတျောသို့ သှားရပါ မညျ။ မွပေုံအညှနျးအတိုငျး အရှအေ့ရပျရှိ စတေီ တျော ခွရေငျးမှာရပျပွီး ရှတေိဂုံဓာတျလှကေားအနီး ညောငျပငျအောကျမှ သိင်ျဂုတ်တရကုနျးတျောပျေါရှိ မွတျ စှာဘုရားမြားကို ဂါရဝပွုသကဲ့သို့ ဆူးလစေတေီ တျောတှငျ သီတငျးသုံးနတေျောမူသော မွတျစှာ ဘုရားမြားကို ဂါရဝပွုရပါမညျ။ ခှငျ့ပနျကွားရပါမညျ။ အပျရာဆိုငျရာ ပုဂ်ဂိုလျ အပေါငျးတို့ကိုလညျး ခှငျ့ပနျ ကွားရပါမညျ။ ဂါရဝပွုရပါမညျ။
(ဆူးလစေတေီတျောတှငျ မွတျဘုရား လေးဆူ ကို ရလှေူရပါမညျ။ တဈဆူလြှငျ တဈခါသုံး ရခှေကျ နှငျ့ အောကျခံပနျးကနျပွား (ဘုရားတဈဆူ တဈစုံ) အားလုံး လေးစုံ။ အိမျမှ ကွိုတငျပွငျဆငျယူခဲ့ပါရနျ။ ရှတေိဂုံမှာဆိုတုနျးက အောငျတံခှနျအောငျပနျးမြား လှူပါသညျဟု ဆိုခဲ့ပွီး။ ယခု သောကျတျောရခေမျြး ဆကျကပျလှူဒါနျးပါသညျဟု ဆိုရပါမညျ။ ရှတေိဂုံ စတေီမှာကဲ့သို့ (ကကုသန်ဓ)ပွီးလြှငျ (ကောဏာဂ မဏ)၊ (ကဿပ) (ဂေါတမ)ဟု ပွောငျးလဲထညျ့ဆို သှားရပါမညျ။
ဆူးလစေတေီ အစီအစဉျပွီးပါက ပုဇှနျတောငျ မွို့နယျ ရကြေျောရပျကှကျထဲက ရှဘေုနျးပှငျ့ စတေီ တျောသို့ သှားရပါမညျ။
ရှဘေုနျးပှငျ့စတေီ မုချဦးရှမှေ့ာရပျပွီး ရှတေိဂုံ စတေီ၊ ဆူးလစေတေီတျောတို့မှာကဲ့သို့ ပဏာမ ဂါရဝ ပွုရပါမညျ။ မွပေုံအညှနျးကို ကွညျ့ပါ။ တနင်ျလာ ဂွိုဟျတိုငျ အရှအေ့ရပျကို တှရေ့လြှငျ (ကကုသန်ဓ ဗုဒ်ဓ) ကို ရညျစူးကနျတော့ရပါမညျ။ ဗုဒ်ဓဟူးဂွိုဟျတိုငျ က တောငျအရပျ၊ (ကောဏဂမဏ)၊ ကွာသပတေး ဂွိုဟျတိုငျက အနောကျအရပျ၊ (ကဿပဗုဒ်ဓ)၊ သော ကွာဂွိုဟျတိုငျက မွောကျအရပျ (ဂေါတမ)။
ရှဘေုနျးပှငျ့ စတေီတျောတှငျ နံ့သာတိုငျ သုံးတိုငျစီ လှူရပါမညျ။ ဖီးကွမျးငှကျပြောသီး မမှညျ့ တမှညျ့ကို ဝယျပါ။ အကှငျးကလေး လေးခုကှငျးလိုကျ ပါ။ အကှငျးတဈကှငျးစီပျေါတှငျ နံ့သာတိုငျသုံးတိုငျကို ထိုးစိုကျပွီး ဘုရားတဈဆူခငျြးစီတှငျ လှူသှားနိုငျ ပါသညျ။ ရှဘေုနျးပှငျ့ စတေီတျောတှငျ အောငျနနျးစံ ပြျော သူတျောစငျမြား သီတငျးသုံးနပေါသော နနျး ဆောငျကွီးရှိပါသညျ။ ပုဂ်ဂိုလျတဈပါးစီတှငျ နံ့သာတဈ တိုငျ၊ ငှကျပြောကှငျးကလေးတှငျ ထိုးစိုကျ လှူဒါနျး ပါလေ။ လှူပွီးတိုငျး လိုရာအသုံးပွုရနျ ဒါနပွုပါသညျ။ လိုရာအသုံးပွုတျောမူပါဗြား။ (ဣဓံမေ ပုညံ၊ နိဗ်ဗာန ဿ ပစ်စယော ဟောတု)၃ လို့ စိတျပါလကျပါ ဆိုပါ လေ။
မွတျစှာဘုရာမြားကို လှူတော့ ဘယျလို ဆိုရမလဲ။ မမေ့သှားဖို့ သတိပေးပါရစေ။ ရှတေိဂုံမှာ လို ဆူးလမှော လိုဆိုပေါ့။ ဟုတျကဲ့ …။ ပွီးရငျ ဗိုလျတထောငျစတေီတျောသို့ သှားကွပါစို့။
အစီအစဉျ (၄) ဗိုလျတထောငျစတေီ
ဗိုလျတထောငျစတေီတျော၏ မုချဦးအဝမှာ ရပျပွီး စတေီတျောအတှငျးမှာ သီတငျးသုံးနတေျော မူကွသော မွတျစှာဘုရားမြားအား ဂါရဝပွုရပါမညျ။ ခှငျ့ပနျရပါမညျ။ သစ်စာအဓိဋ်ဌာနျ ပါရမီဝတျ ဖွညျ့ ဆညျးခွငျးအတှကျ နရောထိုငျခငျးမြား၊ ခှငျ့ပွုတျော မူကွပါရနျ အပျရာဆိုငျရာ ပုဂ်ဂိုလျအပေါငျးတို့ကိုလညျး ခှငျ့ပနျရပါမညျ။ သညျမှာလညျး ဘယျလိုခှငျ့ပနျ ရမှာလဲ။
ရှတေိဂုံမှာ၊ ဆူးလမှော၊ ရှဘေုနျးပှငျ့မှာလို ပေါ့။ မုချဦးမှဝငျလိုကျပွီး ဆံတျောတိုကျသို့မဝငျဘဲ မိမိ၏ဘယျဘကျသို့ ကှဝေ့ငျလိုကျပါ။ တနင်ျလာဂွိုဟျ တိုငျကို တှပေ့ါမညျ။ ထိုအခါ …
ရှဘေုနျးပှငျ့မှာကဲ့သို့ဟူ၍ သဘောပေါကျ လိုကျပါရနျ။ ဗိုလျတထောငျတှငျ ဘာလှူရမလဲ။ ရှေ တိဂုံမှာတုနျးက ပွောခဲ့ပါတယျနျော။ တံခှနျကုက်ကား တဈစုံစီ လှူရမယျလို့ …ဟုတျ။
အုနျးတဈညှနျ့၊ သပွတေဈညှနျ့၊ မိမိမှေး နံပနျးတဈညှနျ့ ပါရမယျလို့လညျး အမှာရှိခဲ့ပါတယျ နျော …။ သို့ဆိုလြှငျ ဗိုလျတထောငျစတေီတျော တှငျလညျး ယခငျ ရှတေိဂုံ၊ ဆူးလေ၊ ရှဘေုနျးပှငျ့ မှာကဲ့သို့ သစ်စာ၊ အဓိဋ်ဌာနျပါရမီ ဝတျကို ဖွညျ့ဆညျး နိုငျပွီပေါ့။ အောငျပါပွီ။
ရှတေိဂုံစတေီတျောသို့ အမွနျပွနျသှားစို့။ ရှငျတျောဂေါတမ မွတျစှာဘုရားအား အဓိဋ်ဌာနျ အောငျခဲ့ပါကွောငျး လြှောကျထားကွပါစို့။ “ဣဓံမေ ပုညံ နိဗ်ဗာနဿ ပစ်စယောဟောတု” လို့ဆန်ဒဖျောကြူး လြှောကျထားကွပါစို့။ ဆုတောငျးကွပါစို့။ ဗွဟ်မာ သိကွား၊ ဘိုးတျောကွီးမြားနဲ့ ရှတေိဂုံဘိုးဘိုးကွီးတို့ကို လညျး သကျသအေရာ ရှိခဲ့ကွခွငျးကို ကြေးဇူးတငျ စကားမြား ပွောကွပါစို့။ ကုသိုလျမြားကို မြှဝပေေးကွ ပါစို့။ ရှတေိဂုံ စတေီတျောသို့ သဒ်ဓါရှငျလနျးဝမျးပနျး တသာ သှားကွပါစို့။
ရှတေိဂုံ စတေီတျော အရှမေု့ချဓာတျလှေ ကားမှ တကျခဲ့ပွီး မနကျကကဲ့သို့ တနင်ျလာဂွိုဟျ၊ တနင်ျဂနှဂွေိုဟျတိုငျမြားကို ဖွတျကြျောလြှောကျခဲ့ ပွီးနောကျ သောကွာဂွိုဟျတိုငျနှငျ့ ကပျလကျြရှိပါ သော၊ မွတျစှာဗုဒ်ဓ ဂေါတမ အာရုံခံတနျဆောငျးတျော ကွီးအတှငျးသို့ ဝငျရောကျပွီး ယခုလို လြှောကျထား ရပါမညျ။
– ဗုဒ်ဓံသရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊ ဓမ်မံသရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစ်ဆာမိ။
– ဒုတိယမ်ပိ ဗုဒ်ဓံသရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊ ဒုတိယမ်ပိ ဓမ်မံသရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊ ဒုတိယမ်ပိ သံဃံသရဏံ ဂစ်ဆာမိ။
– တတိယမ်ပိ ဗုဒ်ဓံသရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊ တတိယမ်ပိ ဓမ်မံသရဏံ ဂစ်ဆာမိ၊ တတိယမ်ပိ သံဃံသရဏံ ဂစ်ဆာမိ။
– ဥပမေိ ဗုဒ်ဓံသရဏံ၊ ဓမ်မံသံဃဉ်စ နတ်တရံ၊ သမာဒိ ယာမိ သီလာနိ။
ဘန်တအေရှငျဘုရား၊ ရိုသစှောဖွငျ့ လြှောကျ ထားအပျပါသညျဘုရား။
ဘုရားတပညျ့တျောသညျ အရှငျမွတျထံ၌ သစ်စာ အဓိဋ်ဌာနျပွုခဲ့သညျ့အတိုငျး (ရှတေိဂုံစတေီ) (ဆူးလစေတေီ) (ရှဘေုနျးပှငျ့စတေီ) (ဗိုလျတထောငျ စတေီတျော)တို့တှငျ သီတငျးသုံးလကျြရှိတျောမူကွ ကုနျသော မွတျစှာဘုရား လေးဆူတို့အား ယခုအခါ ပူဇျော ရှိခိုးကနျတော့ပွီး ဖွဈပါသညျဘုရား။
သရဏဂုံသုံးပါး ဆောကျတညျခဲ့သော ကု သိုလျ၊ ငါးပါးသော သီလတျောမြား ဆောကျတညျခဲ့ သော ကုသိုလျ၊ အောငျတံခှနျမြား၊ အောငျပနျးမြား၊ အောငျ သောကျတျောရခေမျြးမြား၊ အောငျ နံ့သာတိုငျ မြား လှူဒါနျးခဲ့သော ကုသိုလျမြားနှငျ့ သစ်စာအဓိဋ်ဌာနျ ပါရမီဝတျကို သတျမှတျခြိနျကာလအတှငျး အောငျ မွငျစှာ ဖွညျ့ဆညျးနိုငျခဲ့သော ကောငျးမှုမြား၏ အကြိုး အားသညျ ဒုက်ခခပျသိမျး၊ ဒေါသခပျသိမျးတို့ ကငျးရာ ငွိမျးရာ ခြုပျရာ သိမျးရာ ဖွဈတျောမူပါသော၊ အသင်ျခတဓာတျနိဗ်ဗာနျမွတျသို့ ရောကျပါစကွေောငျး၊ ကောငျးသော အထောကျအပံ့ (ဖွဈပါစသေတညျး)၃ အရှငျမွတျစှာဘုရား။ (နိဗ်ဗာနဿ ပစ်စယော ဟော တု)၃
ထို့နောကျ သဒ်ဓါရှငျလနျးဝမျးသာစှာနှငျ့ (၁) သကျသအေရာ၌ တညျရှိပေးခဲ့သော ပုဂ်ဂိုလျမြား၊ နတျမငျးကွီးမြားနှငျ့ အမိအဖမြား၊ (၂) ဝသုန်ဒွေ နတျ မငျးကွီးနှငျ့ ငရဲသနငျး ယမမငျးကွီး၊ (၃) ၃၁ ဘုံသား အားလုံးတို့ကို …မိမိ၏ရငျတှငျးဖွဈ စကားနှငျ့ အမြှ ပေးဝေ ဒါနပွုပါသညျ။ ပွီးသျော …လေးလေး နကျနကျ ယုံယုံကွညျကွညျ ဝမျးသာအားရ ဤသို့ ရငျ့ကြူးဆန်ဒပွုလိုကျပါ၏။
ဣဓံ မေ ပုညံ။
(နိဗ်ဗာ နဿ၊ ပစ်စယော ဟောတု)၃
သမ်မာဆန်ဒဟူသမြှ၊ ပွညျ့ဝခမျြးသာ အောငျ ကွပါစေ၊ အောငျပါစသေျောဝျ
Categories:	ဂါထာတျောမြား, ဆောငျးပါး, ယတွာ	/ by manawmaya June 28, 2018